Willmar, MN - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Rugta caafimaadka ee Willmar waxaa la aasaasey sanadkii 2009 iyada oo la siinayo deeq 2 sano ah si loogu aqoonsado xarun sanadka oo dhan ku taal aagga Willmar. Bukaanadooda iyo shaqaalahoodu way koreen sanadaha oo dhan welina way u kobcayaan sidii hore! Willmar waxaa ka shaqeeya laba kalkaaliye caafimaad iyo caawiye dhakhtar.
Pamla Greiner FNP-C waxaa la heli karaa Talaadoyinka iyo Khamiista, Ann Day PA waxaa la heli karaa Isniinta iyo Arbacada (Xilliyeed Abriil-Disembar) iyo Ruth Haamankuli FNP-C waxaa la heli karaa Isniinta-Jimcaha.
Macluumaadka Xiriirka Willmar
Address: 1804 SW Trott Ave, Willmar, MN 56201
Phone: (320) 214-7286
Fax: (320) 214-7223
Shaqaalaha Xafiiska Dhexe (Willmar)
- Jessica Garcia, RN, Kalkaaliye Caafimaad / Kormeeraha Goobta
- Brenda Molina Perez, Hogaaminta Kooxda PRC
Veronica Garcia, Khabiirka Caafimaadka Bulshada (CHS)
Veronica waa Certified MNSURE Navigators waxayna ka caawin kartaa diiwaangelinta MNSURE.
Waxay sidoo kale ka caawin karaan bukaanka helitaanka ilaha bulshada ee agagaaraha, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn:
Ka caawi isqorista Barnaamijyada Gobolka sida Caawinta Caafimaadka iyo Daryeelka Minnesota, sanadka oo dhan
Jadwalka ballamaha gaarka ah ee ka baxsan Adeegga Caafimaadka Bulshada Community.
Ugudbinta Adeegyada kale ee Bulshada